Bentley Map XM vrs. Geographics V8 - Geofumadas
Bentley Map XM vrs. Juquraafiyada V8
Mee, 2008 Microstation-Bentley
Markii hore waxaan soo sheegnay aragti hore waxa ka mid ah Bentley Map, hadda waxaan jeclaan lahaa in aan falanqeeyo waxyaabaha la midka ah si dadka isticmaala aqoonta Geographics ay waayaan cabsigooda.
Haddii aan ahaan lahaa Bentley Systems, doonaysaan inaad isugu keeno codsiyada geospatial, tan waxa ay u muuqataa in inkastoo qalabka weli yihiin kuwo aad u xoogan, sii caado ah in lagu soo hagaajiyaa "user yaa garanaya na" halkii "qabanayaan users GIS." Inkastoo aan ogahay in Bentley habaynayso siyaasadda gaari BentleyMap dadka isticmaala ay kuwaad kula Engineering si fiican u taagan si ay u koraan ... waxa aad ku kici doona oo ku saabsan tartanka xoog leh ay ku Geospatial. Waayo, hadda, qaar ka mid ah isbedel ku meel codsiyada ayaa ku haboon, laakiin mar kale, weli kala firdhiyey qalloocan.
Si aan u falanqeyno kuwa la midka ah, waxaanu soo bandhigi doonaa codsiyada Bentley Map afar qaybood, sidaanu u isticmaalno, waxaan ku dhejin doonaa hyperlinks:
1 Dhismaha Dhismaha
Kala saar oo u ekaanshaha sifooyinka walxaha vector
Cusboonaysii iyo dib u habee database-ka
Macluumaadka laga soo qaato ArcGIS iyo kuwa kale
Dhismaha kulaylka jodiga
Soo saarista khariidadaha daabacaadda
2 Falanqaynta Muuqaalka
Kala-bixinta iyo muuqaalka lakabyada
Xiriirinta ArcGIS iyo kuwa kale
Is dhexgalka Google Earth iyo kuwa kale
3 Dhismaha fikradda
Qeexidda qaybaha iyo sifooyinka
4 Horumarinta Qiiqa
Xiriirinta Geo Web Publisher
Isku xirka Wicitaanka mashruuca
Xiriirinta SDE / MXD
Ka faa'iidaysiga xaqiiqda ah in aan noqon doono safar, waxaanu eegaynaa Bentley Map, hadda, bal aynu eegno qaybta koowaad:
In waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah faa'iidooyinka ugu fiican ee MicroStation Bentley Map hadda in ka badan tartanka iyadoo dhismaha CAD qalab Microstation oo dhan iyo ma in la dilo isticmaalka khayraadka computer adigoo hababka weyn ama maareeyaan sawirada. Aan aragno sida qalabka beddeleen bedeley gudahood.
Ka hor: "Qalabka / juquraafi / abuurka"
Hadda: "Qalabka / geospatial / abuurka "topology"
Codsiyada abuuritaanka qaababka, abuurista centroids, ururada jimicsiga / xuduudaha / qaabka iyo aagga xaqiijinta / centroid waa la sii wadaa
Ka soo bixiyay meeshan mishiinka ku xirnaanta meel u dhow, ayaa loo diray guddiga nadaafada jirka
Sidoo kale gawaarida baasifiga ah (jilayaasha) ma ahan halkan, taas oo faa'iido u laheyd inay ku hesho khaladaadka kala-dhexe ee u dhexeeya khariidadaha ama sidoo kale inay abuuraan walxo ka soo socda shayada dheeraadka ah, sida waddooyinka.
iyo sidoo kale waxaan ka tirtiray mishiinka sawir-celinta ee loo yaqaan 'mastar sawir-qaadista' kaas oo si fiican u shaqeeyay si uu u helo qaladaad ku-meelaynta sifooyinka ama walxaha aan la xidhnayn, hadda waxay ku jirtaa "qalab / geospatial / utilities"
Sidoo kale si qarsoodi ah, abuuraha tuubbada ayaa u muuqda in uu ku jiro qalab xaqiijin isku mid ah laakiin tani waxay weli tahay shuruudaha Deynta.
Ka hor: "Qalabka / juquraafi / nadiifinta bukaanka"
Hadda: "Qalabka / geospatial / topology nadiifinta "
Halkan wax waliba waa isku mid, marka la barbardhigo buuggan loo direy baraha qalabyada isku xirka walxaha u dhawaanshaha iyo raadiyaha dirxiga ee hore u ahaa barxadda abuurista.
Dialog nadiifinta ayaa sii wadata inay si lamid ah u shaqeyso Keyin, markaa waan sii wadi doonaa in aan u dooranno kuwan qalabkan
Waxaa sidoo kale laga saaray cutubkan bandhigga qaansaydhka, kaas oo loo diray "qalab / geospatial / utilities"
Post Previous«Previous Bentley Map XM, Imaanshiyaha Kowaad
Post Next Shirkii Shirka ee 2008 ee GobolladaNext »
9 Jawaab "Bentley Map XM vrs. Geographics V8 "
Berenice isagu wuxuu leeyahay:
Nofeembar, 2012 at
ma Well oo dhan atunso fahmaan, laakiin deberedas dib u eegaan meesha, sida Zacatecas este1 meelaha 13 14.Si iyo kulan kasta meesha aad ka filan, jidka Fanica ah si ay u baaraan waa kan tomf3 xogta, sida podreda lahaa a misconfigured been taasi ka dhigan tahay in suusho dhexe ee x = 500,000 ayaa barakaca ah.
Qofka isticmaala qeybahaas waa mid cajiib ah.
Waxay u egtahay in calaamadaha khaaska ah aan loo isticmaali karin halkaa.
Roberto isagu wuxuu leeyahay:
Fadlan, ma ii sheegi kartaa sida loo qoro xarafka "ñ" oo leh xarafka RomanS font-ka MicroStation J
Hagaag, horay u soco waxaanan rajeynayaa inaad sameyso go'aanka ugu qoto-dheer oo waxtar leh ee ganacsigaaga.
CRISTIAN isagu wuxuu leeyahay:
Thanks for comments aad!
Faa'iidada aan haysto ayaa ah wakhti, wixii aad ii sheegtay, xalka ayaa cad. Si loo abuuro oo loo habeeyo «GISes», waxaan horey u helnay aaladdii ugu fiicneyd oo waxaan heysanaa amar fiican, Microstation (oo leh taageerada juquraafi ahaan, isgaarsiinta, iwm). Waxaan aaminsanahay in xarunta ay soo bandhigtay ArcGIS inay noqon doonto caarada irbadda si loo buuxiyo xogta iyo ka-faa'iideysiga xiga ee GIS. Ugu yaraan fikrad. Waqtiga dheerna waxaan u tagi doonaa adeegsiga khariiddada Bentley (inkasta oo ugu dambeyntii nooca cusub ee Microstation uu yimaado ...) gaar ahaan sababtoo ah habka loo yaqaan 'Geoengineering' (hydraulics iyo isku-darka InRoads), laakiin waxay nagu qaadan doontaa inaan abuureyno meshkaas oo dhan.
Mar labaad waad mahadsan tihiin!
Hello, gaar ahaan waxaan leeyahay heer ku qanacsanaanta Map Bentley, taas oo muujinaysa marka aan ka hadlo faa'iidooyinkeeda, si kastaba ha ahaatee waa inaan daacad ka ahaado tan iyo markii aan ka hadlayay ku saabsan daciifnimadooda.
Wax badan ayaa laga fahmaa nooca isticmaale Bentley, Juquraafi ahaan wuxuu ahaa aalad leh qaab geospatial ah oo loogu talagalay dadka isticmaala injineerada sidoo kale doonaya inay sameeyaan GIS, waxay la micno tahay inay ka faa'ideysanayaan naqshadeynta shaqooyinka toosan, biyomareenka, Mashruuca caqliga leh, qaab dhismeedka, dhismaha waxa Bentley qabato iyo ArcGIS ma qabtaan. Taasi waa sababta xariiqda loogu yeero Geoengineering. ESRI waa mid saafi ah GIS, oo leh kordhinta caadada ama codsiyada laamaha kala duwan ee khariidaynta (iyo aagag kale), laakiin had iyo jeer leh qaab GIS; Awooddiisa ayaa ku jirta falanqaynta iyo muuqaalka, taas Bentley kama sarreyn doono.
Marka waa inaad qortaa kala duwanaanta halka aad aadeyso, ma la qabsan doontaa isdhaafsiga codsiyada injineerinka, mise waxaad si fudud u adeegsan doontaa miiska sawirka Microstation? Mana soo jeedin karo inaad sii wado ku dhejinta joqoraafi ahaan, maaddaama ay tahay aalad ku dhici doonta adeegsiga inkasta oo ay ku sii shaqeyn doonto wixii ay qabatay (oo qabato). Juquraafi ahaan ma ogolaanayaan waxyaabo sahlan sida joomateri isku dhafan (oo godad leh godad), adigoon lahayn inaad sameyso unugyo ama qaabab murugo leh oo aad sameyso falanqeyn xagga "waa in la gooyo xididdada", ka dibna waxay leedahay xaddidnaan ku aaddan maaraynta daah furnaanta ama daabacaadda wanaagsan. dhadhamin
Bentley Map xalin waxyaalo la mid ah (iyo qaar badan) laakiin haajiraan ka Geographics in Bentley Map sidadban xoog leh, maadaama ay ahayd maalin ArcGIS ArcView 3x 9x baas.
Khariidadda 'Bentley Map' laguma bilaabi karo buug-gacmeed fudud oo adeegsanaya (naxariis leh), maxaa yeelay aad buu u xumaa. Waxay ka kooban tahay wehel khaas ah si ay u qabato waxyaabo aad u fudud (markii ugu horreysey), sida dhisidda mashaariicda haddii uusan isticmaale waligiis ku sameynin Juqraafiga. Intaa waxaa sii dheer, helitaanka shaqaale aqoon u leh aaladda (Bentley Khariiddada) macno ahaan waa wax aan macquul aheyn waddamada aan la hadalno.
Tanna, ArcGIS ayaa si fudud kuugu garaacaysa inaad sameyso waxyaabo fudud (falanqayn, daabicid, warbixinno, xiriirinta keydka macluumaadka, iwm.). Ma dhahayo Khariiddada Bentley ma awoodi kartid, runti waad ku sameyn kartaa cajaa'ibyo badan, laakiin sameynta waxyaabo aad rabto inaad ku muujiso waqti gaaban ... waxay kujirtaa awoodii aaladda.
Oo hadaad ula jeedo inaad dhisto geodatabases shaqsiyeed ama mashruuc ku saleysan mxd, runti waxaan u arkaa in sida ugu fiican ee kuugu haboon ay tahay ArcGIS. Kobcintu sidoo kale waa isku mid adag labada qalabba laakiin waxaan arkaa in tani aysan ahayn dantaada. Waxaan ku qasban nahay inaan waqti gelinno iyo tababarno agabyada aadanaha marka laga hadlayo dhismaha macluumaadka, maxaa yeelay inkastoo ay jiraan wax badan oo durba jira, ma lihid wax walba oo aad ku sameysid barnaamijka CAD. Sidoo kale haddii aad leedahay rukhsad Microstation, ma xuma in topologies isku-dhafan ay ku dhisan yihiin dgn ka dibna xaddiga loo yaqaan 'ArcMap' inta aad ka heleyso tabaha dhisidda xogta vector-ka.
Ugu dambeyntii, marka la eego joogteynta iyo ganacsiyada faa'iidada leh, waxaad u baahan doontaa inaad hesho dadka u shaqeeya ArcGIS, waana mid fudud.
Waxaan u maleynayaa in ay habboon tahay in la iibiyo farsamooyinka halkaasoo habka ganacsiga u socdo, si looga fogaado ku qanacsanaanta isbedelka; Waxay yihiin kuwa ka dhigaya shirkaddaada inay guuleystaan ​​oo ay lumiyaan ... way xanuunsadaan.
Waxaan rajeynayaa inaanan ka tagin aad u badan.
Waxaan ka shaqeeyaa Parc Agrari del Baix Llobregat:
Sidaad ku arki karto iskuxirka jawiga shirkadaheygu waa maaraynta dhulka (si isdaba joog ah). Ujeedadu waxay tahay in ay had iyo jeer u adeegsanayeen Microstation sidii aalad sawirka CAD (oo leh faa'iidooyinkeeda oo dhan!) Laakiin dhismaha mashruuca GIS waa luqad ka gudubta rabitaanka, waqtiga iyo macaashka loo qaadan karo markii la barbar dhigayo ArcGIS (aragtidayda) ... laakiin sida aad si fiican u dhahdo waxaan ka baqayaa in qiimaha kumbuyuutarradu aysan dhibaato ahayn (runtii barnaamijku horeba wuu u jiray), tababarku wuxuu ku bilaabmay kheyraadka ... waana diidnay si loo horumariyo xalalka la diyaarshay (haddii aysan ahayn kiis ba'an ...).
Su'aalkeyga ugu weyni waa haddii khariidada bentley ay ku tartami karto heerka mashaariicda abuuraya sahlan ee arcgis? maaddaama dadka isticmaala hadda ay yaqaanaan bey'adda Microstation, (laakiin ma ahan heerka heerka abuurista mashaariicda juquraafiyada, iwm ... laakiin heerka isticmaalka) taasina waa sababta aan u maleynayo inay si sahlan u kobcin karaan. Wax ka badan wax kasta, waxaan jeclaan lahaa inaan awood u yeesho inaan la kulmo isticmaalka bentley map marka lagu daro arcgis.
Waxaan rajeynayaa in arrintan aan ka faalloodo inaad iga caawin karto go'aankayga ... Waxaan isku dayi doonaa inaan helo demo Bentley Map si kasta ...
Ah! iyo mahadsanid!
Way adag tahay in lagu siiyo talo noocaas ah markay kugu dhacdo istaroog adiga oo aan ogayn jawiga shirkaddaada. Waa isku mid sida barnaamijyada kale, adeegsadayaasha caadeystay inay la shaqeeyaan hal qalab ma doonayaan inay u haajiraan mid kale waxaan u maleynayaa inay ahaadaan kuwa adeegsada Microstation Geographics ay aad ugu faraxsan yihiin sida sahlan ee dhismaha CAD iyo maamul wanaag. Maahan wax aad u badan isticmaalka lagu bixinayo heerka falanqaynta, aragtida ama daabacaadda.
Waxyaalahaas (kaas oo ay jecel yihiin) la qaban karto ArcGis, laakiin marnaba si sahlan bixiya barnaamijka CAD laakiin Geographics qireen ayaa xadka sida in awoodaha kale GIS.
Haddii ay tahay inaan isbarbar dhigo ArcGIS iyo Khariiddada Bentley ... waxay kuxirantahay waxaad u isticmaali doontid. Haddii aad nooga sii sheegto waxa ku saabsan meheraddaadu, meesha ay macaamiishaadu ku sugan yihiin iyo halka ay ka fikirayaan inay sii kordhaan, labada xal waa mid adag waana inaad cabirtaa haddii cabsidaadu ay si fudud u tahay sicirka softiweerka ama qiimaha sameynta kheyraadka ama horumarinta xalka. Caadi ... in labada xaaladoodba ay tahay inaad maal gasho inaad aado ArcGIS ama Khariiddada Bentley.
Good, waxaan qabto su'aal ku saabsan Bentley Map (waxaan soo shaqeeyay MS Geographics, laakiin dabcan in ay ka faa'ideysan sida GIS ma aha mid aad hawl, dhib sii kordhaya mashaariicda, kulmi VBA ilaa barnaamaj ... iyo shirkada aan la bilaabin heshiis ay ugu ArcGIS, laakiin shaqaalaha waxaa la caadaysteen in ay la MS shaqeeya laakiin mashaariic injineernimada yar, oo aan ku qaataan more, laakiin sababta oo ah dhibaatada, dhiig-miirashada ee GIS. aynu rabto in aad isticmaasho ArcGIS, laakiin shaqaalaha ay yihiin diidan in ay ku badasho si hufnaan sawir MS ...): waa maxay noqon lahaa RAYIGAAG marka la barbar Bentley Map in ArcGIS aan akhriyey posts oo la arko videos bandhig ... laakiin waxaan isku hallaynina Bentley ha ... waa si fudud buuxsan, waayo, abuurista, warsiinta, geoprocessing ... ama sida adiga kugu saabsan ,? Miyuu jiraa xaqiiqo dhab ah?
Thanks for blog! iyo jawaabtaada !!